Ukuhamba ngezinyawo udabula emahlathini aseSmåland - Vakashela eHultsfred
ezindleleni ezithambile ezinokubukwa okuhle
Gqoka amabhuzu akho, phaka isikhwama sasemini nejezi elinyene kakhulu bese uphuma uye komunye wemikhondo yethu enhle yokuhamba izintaba. Lapha ungahamba ezindleleni ezithambile ezinokubukwa okuhle emahlathini, emadolobhaneni nasemasimini ezolimo.
EJärnforsen, kunenethiwekhi ephelele yemizila yokuhamba intaba enhle, yonke iqala khona kanye ngaphandle komphakathi. Ekuqaleni kukhona
E-Hjortenleden uhamba emigwaqweni ewubhuqu emihle unqamula izindawo zokulima namadolobhana, axutshwe nezindlela ezincane ezinqamula ehlathini. Wena
Around Hammarsjön uhamba uzungeze iStora Hammarsjön futhi ulunge kakhulu ohambweni losuku. Uhamba kakhulu endleleni emincane
Thola iVirserum uwedwa. Uma unesikhashana esisele ngesikhathi uvakashele eVirserum, sincoma ukuthi usenze
Ungaqala uhambo lwakho ngokusebenzisa isiqiwi semvelo i-Länsmansgårdsängen. Umzila ukuhambisa emphakathini omdala wezimboni i-Hjortöström futhi ikuyisa phambili
Umzila uqala engadini yase-Kalvkätte, okuyindawo enhle kakhulu ekuphumeni komgwaqo onguthelawayeka 23 ubheke esikhungweni sase-Hultsfred. Paka imoto
Lomzila unqamula engxenyeni engenhla kamasipala waseHultsfred futhi uxhuma i-Ostkustleden neSevedeleden. ILönnebergaleden ingeyenethiwekhi yaseSweden yemizila esezansi futhi
I-loop egijima kancane echibini. Kunamatafula amabili ekhofi anophahla ngasekotishi iMOK, indawo yokugeza negumbi lokushintshela nendawo yokosa ngendala
I-Emilleden iqalwa kahle kusuka eLönneberga hembygdsgård noma eMariannelunds naseHessleby hemgårdsgård, lapho kunamathuba amaningi okupaka. Uyakhetha futhi